ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်နှင့် Broadcom 2014 NAB Show မှာဂြိုဟ်တု, Cable ကိုများနှင့်မြေပြင်အခြေစိုက် Applications ကိုများအတွက် UHD TV ကို၏အဆင့်မြင့် Delivery သရုပ်ပြရန်
RENNES, ပြင်သစ် - မတ်လ 31, 2014 - အဆိုပါ 2014 မှာ NAB ပြရန်, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်နှင့် Broadcom 4K ၏ပေးပို့သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် က Ultra HD (UHD) မျိုးဆက်သစ်များအတွက်ထုတ်လွှင့်စီး ဂြိုဟ်တုထွန်းသစ်စ High-အသုံးဗီဒီယို Coding (HEVC) စံမှတဆင့်, cable များနှင့်မြေပြင် applications များ။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ Broadcom ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦး Set-top Box လေး (STB) နဲ့သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' ဆုရ Vibe (TM) VS7000 Multi-screen ကို encoding က / transcoding ပလက်ဖောင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် BCM7445 က Ultra HD ဗီဒီယိုကဒီကုဒ်ဒါ system-on-a-chip ကို (SoC) ။ အဆိုပါ Broadcom STB-Vibe VS7000 ပေါင်းစည်းမှုမှာသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' တဲအတွက် featured ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန်, SU2610 ။
"၌စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားနှင့်အမျှ က Ultra HD အကြောင်းအရာ, ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်နှင့် Broadcom 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုဗီဒီယို bandwidth ကိုအသုံးပြုမှုကိုလျော့ချကြောင်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ HEVC နည်းပညာများတိုးတက်အတွက်လမ်းကိုဦးဆောင်နေပါတယ် "ဟု Christophe Delahousse, သမ္မတ, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကဆိုသည်။ "Broadcom ရဲ့ BCM7445 chipset ကိုနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vibe VS7000 HEVC ကဗီဒီယိုစနစ် viewer ရဲ့ STB ဖို့ headend ထံမှအဆင့်မြင့် UHD ပေးပို့မောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်သရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ ?"
Broadcom ရဲ့ BCM7445, စျေးကွက်အပေါ်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး UHD TV ကိုဗီဒီယိုကဒီကုဒ်ဒါဖြေရှင်းချက်ချိတ်ဆက် Multi-screen ကိုအိမ်တွင်းဖျော်ဖြေမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ UHD ကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းအင်အားကြီး STBs ။ အိမ်မှာကြည့်ရှုဖို့အဓိကဂိတ်ဝေးသကဲ့သို့, BCM7445 ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယို On-demand (VoD), ဂိမ်းကစားခြင်း, လူမှုရေးမီဒီယာ, နဲ့ Web စတိုးဆိုင် applications များအဖြစ် applications များ၏ကြီးမြတ်သောအကွာအဝေးကိုထောကျပံ့ဖို့ပို transcoding, CPU ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်နေအိမ်ကွန်ယက် throughput ကယ်တင်တတ်၏။
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' MediaFlex (TM) ဗွီဒီယိုကို operating system ကိုမောင်းနှင်ခြင်း, Vibe VS7000 တစ်ဦးအောင်မြင်မှုများ "တွင်ဘာမှ, ဘာမှထွက်" ရိုးရှင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့် OTT ၏ပေးပို့များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းစပ် encoding က / transcoding ပလက်ဖောင်း, Web ကို TV ကဖြစ်ပြီး, IPTV န်ဆောင်မှု။ အားလုံးအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်ပို့ဆောင်မှုကို formats မှထို့အပြင် Vibe VS7000 စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို application များအတွက် HEVC ကဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းအဖြစ်နည်းပညာများအဖြစ် MPEG-Dash နှင့်ဗီဒီယိုမှလမ်းကြောင်းကိုဖြေလျော့နေစဉ်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေရာ HbbTV 2.0, ထောက်ခံပါတယ် ဒီနေ့ရဲ့ multi-Platform ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျပို့ဆောင်မှု။
"သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS7000 အဆိုပါများအတွက် STBs ၏ကျယ်ပြန့ထဲမှာပြံ့နှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ BCM7445 SoC စမ်းသပ်ရန်နှင့်တခုအဖြစ်ဖို့ရာနဲ့စံပြဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု, ကုန်းနှင့်ကေဘယ်လ်စျေးကွက်, "ဆရာယောဟနျ Gleiter, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, စျေးကွက်, Broadband ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စု, Broadcom Corporation ကပြောခဲ့သည်။ "NAB မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံဖောက်သည် UHD encoding က, ဒီကုဒ်ဒါနှင့် HEVC နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းအမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုကြည့်ရှုရန်ပေးပို့များအတွက်ကိုယ်တွေ့အဆုံးသတ်-to-end ဂေဟစနစ်၏တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ "
2014 NAB ပြရန် Broadcom HEVC NAB NAB ပြရန်, Las Vegas မှာ, Pamela Kleibrink Thompson က, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် က Ultra HD VS7000 ¢ViBEâ " 2014-03-31
ယခင်: Footage.net NAB '' 14 များအတွက်အထူးပြုမော်ကွန်း၏နောက်ဆုံးစာရင်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Digigram AoIP ဖြန့်ဖြူး codec IQOYA * စားသုံးခြင်း / LINK အခုတော့ 32 MADI စတီရီယိုလိုင်းများမှတက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် 32-ru အတွက် 1 စတီရီယို codec